version 0.8.1 – ဒါဟာ bug ကိုမင့်! တကယ့် feature ကို!
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2011 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 46 comments
အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်အမဲလိုက် bug တွေကြောင့်
Transposh မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မားနိုင်တဲ့ coding စံချိန်စံညွှန်းအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုမျှ bug တွေကြောင့်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်. ဟုတ်ကဲ့, သင်သည်ဤညာဘက်ကြားရကြပြီ, တွေ့ရှိသုည bug တွေကြောင့်. သို့သော် – အနည်းငယ်ပြဿနာလည်းမရှိ, အခြားလူများကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်ကြသည်မဟုတ်ကြပြီးအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့ code ထဲတွင် bug ရှိသည်ပြုပါ. ဒါကြောင့်သင်ဟာ Transposh install လုပ်ထားလျှင်တစ်ခုခုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်မ, WordPress ကိုရာတွင်ဖြစ်နိုင်လည်းမရှိ, သို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုနေတဲ့ Theme ကိုရာတွင်, အခြားပလပ်သို့မဟုတ်ပဋိပက္ခ, သို့မဟုတ် jQuery အချို့ရှုပ်ထွေးဖန်ဆင်းတော်, သို့မဟုတ်သင်ဆဲ Internet Explorer ကိုအသုံးပြုနေတယ်2သို့မဟုတ်ဤသင်၏အမိကိုဆက်စပ်ရာတစ်ခုခုဖြစ်, သို့မဟုတ်သူမ၏မိခင်, သို့မဟုတ်သူမ၏အဖွား, သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်ကိုဖန်တီးခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးကလာပ်စည်း. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်! ဘယ်တော့မှအစဉ်အဆက်!
တစ်ခုခုအလုပ်လုပ်နှင့်သင်မပါရှိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကိုကအစီရင်ခံ, ကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုချက်ချင်းရှာဖွေ, တခါတရံ, လာသောအခါစိတ်ကောင်းရှိ, ကျနော်တို့ကတကယ်တော့သူတို့အားအခြားလူများ bug တွေကြောင့်ရှောင်ရှားရန်တစ်ခုခု code.
ဒီ Release သူတွေကိုဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ကိုသာ feature သစ်စီမံခန့်ခွဲမှု interface ကိုမှာ comment ဘာသာစကားများထားရန်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည် (တစ်စုံတစ်ဦးကစပိန်အတွက် posted လျှင်အမှန်တကယ်သင့်အင်္ဂလိပ်စာအတွက် site ကိုသို့မဟုတ်ဒုဂါထာ browsing နေစဉ်) .
ပုံမှန်အားဖြင့်အသက်ရှင်သောလူ့ဘာသာပြန်ချက်များကို backup လုပ်ထား Enable
အကိုထောက်ခံ ， Tag သီးသန့်အတွက်သင်္ကေတ (၎င်း၏မကော်မာ, အမှန်!)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AJAX အတွက်ကောထောက်ခံမှုပြန်လည် (cross မူလအစ, Ajax)
မှန်ကန်သောအခြေအနေတွင်သေချာ lazyloader ဝန်သွားအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါလား
Google အတွက်လွန်းကြီးမားတဲ့ဘာသာပြန်ချက်များကိုရှောင်ရှားရန်အသုတ်ဘာသာပြန်ချက်အရွယ်အစား၏တွက်ချက်မှု Fix
နှစ်ဦး jQueryUI ဗားရှင်းထည့်သွင်းကြသောအခါ Fix, အဓိကအားဖြင့် wordpress ကို 3.2.x များအတွက်
ဖယ်ရှားရန်ပုံသေ widget က [ဘာသာစကား] ဖိလိပ္ပုသည် Trauring အားဖြင့်မှတ်ချက်ပြုအဖြစ် buggy ဖြစ်သည့်
တိုက်ရိုက် widget က function ကိုသုံးပြီးအသုံးပြုသူများအတွက်ကျိုးပဲ့သောဆိုဒ်များကို Fix
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို အတူ Tagged: bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2011 တွင် 3:05 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2011 တွင် 3:12 ညနေ
ဆန်နီ Dancing ကပြောပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2011 တွင် 4:34 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2011 တွင် 4:39 ညနေ
ဝမ်းနည်းပါတယ်, that might not be the reason. But due to some other reasons, translated pages are not getting indexed 🙁
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2011 တွင် 8:14 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 16, 2011 တွင် 12:18 ညနေ
I found only english content in sitemap.xml (XML-Sitemap Gen 3.2.6) . How to integrate content in many language that “အားလုံး translate” in sitemap.xml?
ဒီဇင်ဘာလ 25, 2011 တွင် 12:25 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလ 14, 2011 တွင် 2:29 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 14, 2011 တွင် 2:46 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 14, 2011 တွင် 3:19 ညနေ
But my is inbedded in my header I don’t use through widgets as it caused problems before. How do I change to flags in this case? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 14, 2011 တွင် 4:13 ညနေ
အထည်အလိပ် Meuwissen ကပြောပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 14, 2011 တွင် 9:38 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 14, 2011 တွင် 10:02 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 15, 2011 တွင် 12:08 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလ 21, 2011 တွင် 6:45 နံနက်
I haveacouple of queries. ပထမ, is it possible for someone to translate my pages through transposh. I mean forafriend to accurately translate/alter them but still using the transposh widget?
ဒီဇင်ဘာလ 25, 2011 တွင် 12:28 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလ 28, 2011 တွင် 12:10 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 6, 2012 တွင် 1:18 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 4, 2012 တွင် 8:44 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 4, 2012 တွင် 8:50 ညနေ
ဟုတ်ကဲ့, it is planned, want to help?
ဇန္နဝါရီလ 4, 2012 တွင် 10:43 ညနေ
ဟုတ်ကဲ့, I’d like to help, but don’t know how. I’m notaphp programmer.
ဇန္နဝါရီလ 6, 2012 တွင် 1:15 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 8, 2012 တွင် 9:32 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 8, 2012 တွင် 10:01 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 8, 2012 တွင် 6:49 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 8, 2012 တွင် 8:11 ညနေ
Lars Erik Morin ကပြောပါတယ်
ဇန္နဝါရီလ 10, 2012 တွင် 4:53 နံနက်
Your translation service is completely ridiculous. Perhaps it’s even more ridiculous for translations from English to Swedish, since every Swede who’s interested in the “ဘာသာပြန်ထားသော” sites will knowalot more English than your “service” know of Swedish. The readers will laugh or frown, the only thing they won’t do is understand.
ဇန္နဝါရီလ 10, 2012 တွင် 11:30 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 16, 2012 တွင် 3:06 နံနက်
မင်္ဂလာပါ, first all I love your plugin!
ဒုတိယ, I needalittle help if possible. My site includes different languages and my default language is english. When I switch toadifferent language than english the plugin regularly translate everything. The problem is that I would like the plugin to translate even the default language (English) ထားရှိပါတယ်, because on my buddy press activity not all the entries are the same language. Everything is working fine in all the languages but the default. I hope I was clear, if not you can check on my site faceboooh.com.
ဇန္နဝါရီလ 16, 2012 တွင် 9:53 ညနေ
Maybe the following will help Ofer? I recently installed WP-FB-AutoConnect, and no matter what I did, I kept gettingawebpage that stated, “Please do not access this script directly.” Through much hair-pulling, I discovered that the plugin did actually log me in to my site through my FB account; သို့သော်, I was not being redirected to my site’s Homepage. The developer assured me that it should work.
ဒါကြောင့်, I turned off every plugin and started activating them one by one. The only one that did not allow WP-FB-AutoConnect to conclude properly was Transposh. I relayed this to the FB plugin developer who said this isn’t the first time that this has been reported to him about Transposh.
ဇန္နဝါရီလ 18, 2012 တွင် 4:29 နံနက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2012 တွင် 6:35 နံနက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2012 တွင် 11:56 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2012 တွင် 12:18 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2012 တွင် 11:46 ညနေ
Although I don’t believe that the size of the database matters much in today’s hosting environments, it might indeed be wise to do some cleanups in your situation, on the setting page, I suggest you remove all auto translations older than 14 ရက်ပေါင်း, don’t worry much if you lose any auto translation being used as those should be rebuilt anyhow.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2012 တွင် 2:29 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2012 တွင် 11:44 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2012 တွင် 11:47 ညနေ
ပူဇော်. ကျေးဇူးတင်ပါသည်! We have W3TC, if you know of any issues that it causes with Transposh, please let me know.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2012 တွင် 3:10 ညနေ
Lars Rönnbäck ကပြောပါတယ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2012 တွင် 10:25 နံနက်
I have two issues. ပဌမ, I signed up for the Bing Translate API at Windows Azure Marketplace and copied the account key into the MSN API key field in the Transposh Settings. I believed this would make it possible to use the free translation offered of2million characters. သို့သော်, nothing gets translated. When I click the “အားလုံးအခုဆိုရင် Translate” button it just times out after five attempts.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2012 တွင် 11:17 နံနက်
You have probably not copied the API key for bing correctly, and you are getting an invalid AppID, မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို – in most cases it is not necessary to use it at all, you can just leave the field blank.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2012 တွင် 4:21 ညနေ
I entered the API key because I thought it was required. I have the same problem if I remove the key, နှင့် “Translation incomplete” and timeout after five attempts, both with Google and Bing. I tried reinstalling, removing all automatic translations, and clicking the fix errors by previous versions button. Still no go. I’ve been running Transposh foralong time.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2012 တွင် 8:21 နံနက်
Google translate does not function on your site because you lack the curl library support on your server, MSN actually does work, and I seeasmall bug exposed on the selection ofadefault engine, you have two ways to fix this now – တစ် – install curl, and two, select bing as your default browser on your settings page.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2012 တွင် 5:17 ညနေ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! A simple ‘apt-get install php5-curl’ did the trick 🙂
မတ်လ 4, 2012 တွင် 10:13 ညနေ
ဧပြီလ 29, 2012 တွင် 12:22 နံနက်